खानको लागि कुन तेल उपयुक्त ?
You are at:Home»स्वास्थ्य»खानको लागि कुन तेल उपयुक्त ?
By bktnews Posted on	 September 15, 2020 स्वास्थ्य
काठमाडौं । हाम्रो खानामा तेल नभई हुन्न । तरकारी पकाउन होस् वा दाल झान्न, तेल अनिवार्य छ । त्यसमाथि तारेको, भुटेको खानेकुरामा तेल चहिन्छ नै । त्यसैले हरेक छाकमा हामी तेलको प्रयोग गर्छौं ।
स्यानिटाइजरमा मापदण्ड विपरीत विषाक्त रसायन , प्रयोग नगर्न अनुरोध